Bangladesh down Zimbabwe to reach final – The Asian Post
CHATTOGRAM: With their backs up against the wall, Bangladesh cruised to a 39-run win over Zimbabwe in a sweltering Chattogram to book their place in next week’s tri-series final. Put in to bat by Zimbabwe, Bangladesh’s 175 for 7 was built around a 78-run fourth-wicket stand between Mahmudullah and Mushfiqur Rahim. While Zimbabwe did well to hold Bangladesh back when they had been poised to score many more, they showed no such application with the bat in their chase. Brendan Taylor fell for a duck in the very first over, Zimbabwe stumbled through the Powerplay, and an eighth-wicket partnership of 58 between Richmond Mutumbami and Kyle Jarvis was their only combination of any substance as Bangladesh took full control.
Mahmudullah spanked five sixes in his 62 – only one less than Zimbabwe managed in their entire innings. Liton Das had cracked two of his own to lead Bangladesh’s charge in the Powerplay, taking 21 off an over from young left-arm spinner Ainsley Ndlovu, but when he, debutant Najmul Hossain and Shakib Al Hasan fell in the space of 17 deliveries, the momentum was transferred back to Zimbabwe.
Bangladesh cricket Zimbabwe	2019-09-19
Previous Launch of new online banks in Hong Kong faces further delay
Next Fire at school outside Liberia’s capital kills at least 27